BLOG 12: SWEET VALENTINE’S DAY IDEAS – JOAMAR-JOHN
Valentine’s Day is almost here! Have you thought ofasweet surprise for your special someone? If you are still on the process of thinking or have no idea at all, let me guide you on some sweet ways to surprise your love.
(ဒီနေ့ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့လေးပါ။ အဲ့ဒိတော့ သူငယ်ချင်းတို့ရော ကိုယ်ရဲ့ တစ်ယောက်သောသူ အတွက် ရင်ခုန်သံချိုချိုလေးတွေ ပေးဖို့ စဉ်းစားထားပြီးပြီလား။ ဘော်ဒါတွေလည်း စဉ်းစားနေတုန်းပဲဆိုရင် ဘယ်လို ရင်ခုန်သံချိုချိုလေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်သောသူကို အံ့သြအောင် လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာ အကြံကောင်းလေးတွေပေးမယ်ဗျာ။ )
1. Singalove song to your special one.
(၁။ တစ်ယောက်သောသူအတွက် အချစ်သီချင်းဆိုပြမယ်။ )
2. Buy his/her favorite food.
(၂။ သူကြိုက်ဆုံးနဲ့ အစားချင်ဆုံးအစားအသောက်ကို ဝယ်ကျွေးမယ်။ )
3. Writealove letter.
(၃။ အချစ်သဝဏ်လွှာ စာလေးရေးမယ်။ )
4. Take your love foraspecial dinner.
(၄။ တစ်ယောက်သောသူနဲ့ အထူးညစာ အတူတူ စားကြမယ်။)
5. Give her tons of flowers.
(၅။ ပန်းစည်း ပေးမယ်။ )
6. Try to bakeacake for him/her.
(၆။ ကိတ်မုန့်လေး ဖုတ်ပေးမယ်။ )
7. Go to the park and haveapicnic.
(၇။ ပန်းခြံထဲကို သွားပြီး အတူတူ ပျော်ပွဲစားထွက်ကြမယ်။ )
8. Watchamovie.
(၈။ ရုပ်ရှင်အတူတူ ကြည့်ကြမယ်။ )
9. Getamassage together.
(၉။ နှစ်ယောက်သား အတူတူ အနှိပ်ခံကြမယ်။ )
(၁၀။ ဘုတ် ဂိမ်း အတူတူ ဆော့ကြမယ်။ )
Always remember it’s not about how expensive your gift is. It’s about enjoying and spending the time together!
(ဘော်ဒါတွေ အမြဲတမ်း သတိရသင့်တာက ကိုယ်ပေးမယ့် လက်ဆောင်က ဘယ်လောက် ဈေးကြီးလဲဆိုတာက အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လို အတူတူ ပျော်စရာကောင်းမလဲ ရင်ခုန်စရာအချိန်တွေကို အတူတူ ကုန်ဆုံးမလဲဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ )
(ဘော်ဒါတို့ရဲ့ ဗယ်လင်တိုင်း အစီအစဉ်လေးက ဘာဖြစ်မလဲ။)
Specs (Sunnies Specs).Tee (North Face). Pants (SMYOUTH). Button Down (Penshoppe). Shoes (Adidas).
Location: National Village, Yangon Myanmar
Special Thanks Myanmar Translation by @Mg Bathar
Tagged: diy, fashion, joamarjohn, lifehacks, ootd, ootdmyanmar, ootdmyanmarguy, sunniesph, valentines, valentinesday
BLOG 11: IT COULDN’T BE ANY STRIPER THAN THIS
BLOG 13: OLD TOWN WHITE COFFEE
One thought on “BLOG 12: SWEET VALENTINE’S DAY IDEAS”
You have some really good pictures here!!!